आठ कक्षा पढेका नर्सिङ क्याम्पसको चिफ – Nepal Parikrama
आठ कक्षा पढेका नर्सिङ क्याम्पसको चिफ
डिल्लीराम भट्टराई ।
कक्षा ८ पढेका निमा शेर्पाले करिब ४ सय ३४ जनाको शेयरमा मस्ती लुटिरहेका छन् भन्दा जोकोहीलाई पत्यार नलाग्ला । काठमाडौं महानगरपालिकाको नक्शाफाँटमा ओभरसियर हुँदै इञ्जियर बनेका गम्भीरलाल श्रेष्ठ त झन् संस्थाका अर्का मालदार व्यक्ति हुन् । हातमा इन्ची टेप लिएर श्रेष्ठ महानगरपालिकाको जागिरे हुँ भन्दै सर्भेबाट करोडौं कमाउँछन् भने स्तुपा स्वास्थ्यसेवा सहकारी संस्था लिमिटेडको व्यानरमा स्थापना भएको नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन संस्थान र स्तुपा अस्पतालको कमाइ पनि गजबकै छ । संस्थानका प्राध्यापक डाक्टर बिदुर उपाध्याय अर्का महामहिम हुन् । जोरपाटीस्थित संस्थानमा पुग्दा प्राडा आफ्नो कक्षमा मस्तीले घुर्दै थिए । उनको मुखबाट र्याल निस्किएको थियो भने करिब ५ पटक सर भनेपछि उनी झल्याँस्स ब्युझिए र भने, “कहिलेकहीं यस्तै हो ।”
उनको व्यवहार हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो मानौं प्राडाका अगाडि उनकै कुनै पियन वा घरको निजी कामदार उभिरहेको छ । संस्थाका उपाध्यक्ष भक्तिमान सुब्बा अर्का खुंखार व्यक्ति हुन् । उनी बीर अस्पतालका सरकारी कर्मचारी र स्तुपा अस्पताल, कलेज एवं सहकारीका प्रमुखमध्ये एक हुन् । काठमाडौंको बौद्धस्थित सहकारी अन्तर्गतकै संस्थाले स्तुपा सामुदायिक अस्पतालले नामको बेइज्जत नै गर्ने गरेको छ ।
नाम सामुदायिक अस्पताल तर काम निजी क्लिनिक वा अस्पतालको भन्दा केही फरक छैन । अस्पताल हाताभित्र श्रेष्ठले नै डिजाईन गरेको स्तुपा मोडेल अस्पताल भनेर जनता झुक्याउन ठूलो फोटो झुण्ड्याइएको छ । सुरुमा २५ हजार प्रतिव्यक्ति लगानी गर्ने प्रावधान राखिएर बिसं. २०५८ साल जेठ १९ गते अस्पताल स्थापना भएको थियो । शेयरको रकम ५० हजारबाट १ लाख हुँदै हाल २ लाख ५० हजार पुर्याइएको छ । अस्पताल नामले सामुदायिक त हो तर बिरामीले सामान्य चेक अपको ३ सय १५, इमरजेन्सीको १ सय ५० तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । “सामुदायिक अस्पतालले त कतिपय सेवा निशुल्क गरेको हुन्छ नि, यहाँ त पैसाबाहके केही पनि पाइन्न “बौद्ध टुसालकी साङ्गे लामाले यस्तो बताइन् । पहिले शेर्पाकै घरमा अस्पताल सञ्चालन भएको थियो । त्यसकै आधारमा बोर्डमा आएका उनको दबदबा अत्याधिक रहने गरेको अस्पतालका एक कर्मचारीले बताए । शेर्पा र श्रेष्ठ निर्माण लगायत ठेकेदारीमा पनि डिल गर्ने गर्दछन् ।
शेयरधनी पनि वर्षको एक पटक साधारणसभामा आउने, १२ प्रतिशत डिभिडेन्ट लिने, ट्याक्सी भाडाबापत रु. २५ सय र एक छाक मासुभात खाएर गम्भीरलालको भाषण सुनेपछि लट्ठै पर्ने गर्दछन् । शेर्पा त अहिले पनि कलेजमा नर्सिङ डिपार्टमेन्टको चिफ भएर काम गरिरहेका छन् । शेर्पा र गम्भीरलाल भनेपछि कलेजका पदाधिकारी, लेखा अधिकृत र अन्य कर्मचारी लुगलुग काँप्ने गरेको कर्मचारीको गुनासो छ । हाल अस्पताल रहेकोभन्दा अगाडिपट्टिको स्थानमा अस्पतालकै भवन निर्माण गर्ने भनेर किनिएको जग्गा कलेजको भवन बनाउनका लागि बेचिएको र शेर्पा तथा श्रेष्ठद्वयले ठूलो रकम झ्वाम पारेको सप्रमाण दिनसक्ने एक शेयरधनीले नाम नबताउने शर्तमा भने । “माउ संस्थाको महासचिव समेत रहेका श्रेष्ठ आफूलाई फाइदा हुने बाहेक अरु केही गर्दैनन् । कलेजको जग्गा ९ करोड ६६ लाखमा किनेर १६ करोड ५४ लाख खर्च देखाएका छन् उनले । यसमा कति रकम हिनामिना भएको छ कसैलाई पत्तै छैन“ उनले भने ।
अस्पतालमा हाल ९१ र कलेजमा ८४ जना कर्मचारी रहेकोमा पियन र हेल्परलाई अत्यन्तै न्युनतम तलब दिने गरिएको छ । सञ्चयकोष काटेर रकम राख्ने भनिए पनि १७ महिनासम्म त्यसको कुनै कारबाही चलेन । मिति २०६५ साउनसम्म कलेजले नै अस्पतालका कर्मचारीलाई तलब दिने गरे पनि अघिल्लो भाद्रबाट त्यसको जिम्मा क्याम्पसले लिएको छ । कर्मचारी भनेका पैसाका लागि आउने र तिनलाई जतिबेला पनि स्याक गर्न सकिनै उक्ति श्रेष्ठले पटक पटकका भाषणमा दिने गरेका छन् । भ्रष्टाचारमा लिप्त गम्भीरलालका बारेमा यस अघि पनि नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ । कर्मचारीलाई सेवा सुविधा तथा उपदान एवं स्वास्थ्य वीमा दिने सवालमा जहिले पनि साधारण सभाले पारित गर्नुपर्छ भनेर टार्ने गरिएको छ ।
कलेजमा हाल विपिएच, एचए, विएस्सी नर्सिङ र विपिएनतर्फ पढाइ हँुदै आएको छ । विद्यार्थी पनि व्यवस्थापनप्रति अत्यन्तै रुष्ट बन्ने गरेका छन् । शुल्कको विषयमा सिटिइभिटीको मापदण्ड अनुसार लिने गरेको भनिएपनि स्टाफ नर्समा ४ लाख ३२ हजार, बि फार्मेसीमा ३ लाखसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विद्यार्थीको गुनासो छ । कलेजमा राखिएको बोर्डमा उल्लेखित पदाधिकारी नाम मात्रका हुन् । ती कोही पनि कलेजमा आउँदैनन् । तलब सुविधा सरकारको खाने, निजी क्षेत्रमा पनि आफ्नै हालीमुहाली गर्ने यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही कसले गर्ने ? सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रमा काम गर्न पाइदैन भनेर राज्यले नीति नै बनाए पनि नियमनकारी निकायले आँखा चिम्लिदा केहीको शत्र पल्टिने गरको छ । उमेरले डाँडो काटिसकेका र सरकारी कार्यालयमा पनि कार्य फितलो गरेको आरोप लागिसकेकालाई निजी संस्थाले नामका लागि नियुक्ति गर्दा सयौं हजारौंले जम्मा गरेको शेयर पुँजीको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
Published On: २९ फाल्गुन २०७२, शनिबार १२:४४ 756पटक हेरिएको